Magafeyaal lagu qabqabtay Magaalada Boosaaso | Dhacdo
Home Wararka Maanta Magafeyaal lagu qabqabtay Magaalada Boosaaso
Magafeyaal lagu qabqabtay Magaalada Boosaaso
Taliska Booliska Gobolka Bari ayaa ka warbixiyay hawlgalo maalmihii ugu dambeysay laga waday Magaalada Boosaaso oo lagu soo qabtay shabakad dadka tahriibisa.
Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Bari, G/sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa sheegay in shabakadan ay dadka u tahriibin jirtay dalalka Yemen, Suudaan iyo Liibiya.
“Puntland, gaar ahaan Gobolka Bari waxaa ka dhisneed shabakad Boosaaso ka kaxeysa dadka oo geysa Yemen, ugana sii gudbisa Suudaan iyo Libya. Marka dadkaas qaybtii joogtay Boosaaso waanu qabanay, iyada iyo gaadiidkeedii badda.” Ayuu yiri Taliyaha.
Taliyaha ayaa sheegay inay jirto qayb ka mida shabakadaasi oo dalka Yemen ku heysata dad qaab tahriibin ah looga kaxeeyay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, haddana ay ka shaqeynayaan, sidii dadkaasi dib loogu soo celin lahaa magaalada.
“Waxaa jirta qayb ka mid ah oo joogta Yemen, oo aanu helnay xiriiradoodii iyo dadkii ay heysteen. Marka iyaga qudhooda waxaan la sameynay xiriir, koley lacago ayay dadkaasi ku xiran yihiin inay dowladdu lacagahaasi bixiso oo ku soo furdaamino, maadaama dadka dhibaateysan ay yihiin waalidiin aan waxba awoodin oo carruurtooda ay halkaa ku xiran yihiin, oo laga dhigtay saylad/suuq xoolaha lagu iibiyo, haddana waxay u baahan yihiin dadkaas in ka dowlad ahaan loogu gurmado oo la soo celiyo.” Ayuu yiri Taliyaha.
Taliyaha oo BBC la hadlay ayaa yiri “Gorgortan baa hadda waxaan kaga jirnaa inaan dadkaas ku soo celino Boosaaso, iyagoo aan dhibin waalidiintii dhashay.”
Waxaa uu sheegay in shakabadda hadda lagu qabtay Magaalada Boosaaso ay tahay middii dadka ka kaxeyneysay magaalada, isla-markaana uu xiriirkeedu gaarsiisnaa Suudaan illaa Libya.
“Dadkii dadkaasi kaxeeyay waa dadkii aan Boosaaso ku qabanay oo aanu xirxirnay, waa dadka ugu muhiimsan ee asalka u ah oo dadka uruuriya, lacagtana ku bixiya, illaa Suudaan iyo Liibiyana lagala xiriiro. Iyagaa bud-dhigo u ah dadka sida ay u baxayaan, dadka la kaxeynaayana waa dadkii reer Boosaasood ee asalka ahaa, weliba hooyooyin iyo waalidiin lagu khasbayo inay guryahoodii xaraashaan, iyagoo aan waxba heynin, ilmahoodii la kaxeynayo.” Ayuu yiri G/sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir.
Booliska Puntland ayaa lagu wadaa in xubnahaasi oo aan tiradooda la sheegin inay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh inay dhageysato eedeymaha loo heysto.
Previous articleMacluumaad la xiriira Shirka Golaha Wadatashiga oo dib uga bilowday Muqdisho
Next articleIska horimaad khasaare gaystay oo ka dhacay Boosaaso